Vsmart Live ဖုန်းအား VinSmart မှမိတ်ဆက် - PX
Vsmart Live ဖုန်းအား VinSmart မှမိတ်ဆက်
VinSmart သည် မကြာသေးမီက ၎င်း၏ စမတ်ဖုန်း မော်ဒယ်အမျိုးအစားအသစ် ၄ မျိုးအား မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်သို့ အောင်မြင်စွာ မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်း မော်ဒယ်အမျိုးအစားသစ် ၄ မျိုးအနက် အဆင့်အမြင့်ဆုံး စမတ်ဖုန်း အမျိုးအစားမှာ Vsmart Live ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံတဝန်းရှိ ဖုန်းဆိုင်များ နှင့် mytel အရောင်းဆိုင်ကြီးများတွင် ဝယ်ယူ ရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းသည် အဆင့်မြင့်မားသော လူနေမှုဘဝကို ရယူပိုင်ဆိုင်လိုသော အသုံးပြုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အကောင်းမွန်ဆုံးသော စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုမှု အတွေ့အကြုံများအား ရယူ သုံးစွဲလိုသည့် အသုံးပြုသူများအတွက် Vsmart Live အား အဆင့်အမြင့်မားဆုံးသော နည်းပညာများဖြင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားသည်။
“Vsmart Live ကို ကျော့ရှင်းလှပမှု အပြည့်ရှိစေဖို့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ လှပတဲ့ ဖုန်းကိုယ်ထည် ဒီဇိုင်းကို တောက်ပတဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အတွက် ဈေးကွက်အတွင်းက ဈေးနှုန်းတူညီတဲ့ အခြား စမတ်ဖုန်းတွေ နဲ့ မတူညီတဲ့ သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ နောက်ပြီး Vsmart Live မှာ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အထောက်အကူအဖြစ်ဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် triple camera၊ အကောင်းမွန်ဆုံး လုံခြုံရေးစနစ်၊ ကြာရှည်ခံတဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းနဲ့ အရောင်အသွေး အစုံလင်ဆုံး ဖုန်းမျက်နှာပြင်တွေကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထား ပါတယ်” ဟု [Hsint Sanda, Marketing Director] က ပြောကြားသည်။
အကောင်းမွန်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ ပေးစွမ်းနိုင်မည့် ကင်မရာ ၃ လုံး ပါဝင်မှု
Vsmart Live တွင် အကောင်းမွန်ဆုံးသော ညဖက်ဓာတ်ပုံများ အပါအဝင် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံးသော ပုံရိပ်များအား ရိုက်ကူးနိုင်မည့် 48 MP ကင်မရာ၊ နောက်ခံပုံရိပ်များအား မှုန်ဝါး၍ ဓာတ်ပုံတွင် ပါဝင်သူ၏ မျက်နှာအား ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားစေမည့် အနီးကပ်ပုံရိပ်များအားရိုက်ကူးနိုင်မည့်5MP ကင်မရာနှင့် ၁၂၀ ဒီဂရီအထိ လှည့်လည်၍ panoramic ပုံရိပ်များအား ရိုက်ကူးနိုင်မည့် ultra wide လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည့် 8 MP ကင်မရာများ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို ကင်မရာ ၃ လုံးအား ပေါင်းစပ်ထားသည့် Vsmart Live သည် စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူများအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဆင့် ဓာတ်ပုံများအား ရိုက်ကူးနိုင်စေရန် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေမည် ဖြစ်သည်။
Pixel binning နည်းပညာပါဝင်သည့် Night Mode (ညဖက်ကင်မရာရိုက်ကူးနိုင်စွမ်း)
Vsmart Live အား အသုံးပြုသူများသည် ညဖက်တွင်လည်း အရည်အသွေးမြင့် ပုံရိပ်များအား လွယ်ကူစွာ ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အဓိက ကင်မရာ ဖြစ်သည့် 48 MP ကင်မရာသည် aperture f/1.7၊ pixel binning နည်းပညာနှင့် pixel ဆိုဒ် 1.6 µm (micrometers) ပါဝင်သည့်အတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အရှိဆုံး အသေးစိတ် ဓာတ်ပုံများအား ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် ညဖက်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရာတွင်လည်း အဆိုပါ နည်းပညာသည် ပုံရိပ်ပေါင်းများစွာအား တစ်ချိန်တည်းတွင် ရိုက်ကူး၍ ဓာတ်ပုံ ၁ ပုံတည်း အနေနှင့် ပြန်လည် ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုတိကျပြတ်သားသော ပုံရိပ်များအား ရရှိသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဖုန်းမျက်နှာပြင်နှင့်ဖုန်းကိုယ်ထည် အချိုးအစား ၉၀.၃%
Vsmart Live တွင် ကျယ်ဝန်း၍ တောက်ပကြည်လင်သော ၆.၂” FHD+ AMOLED infinity မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး contrast ratio 100,000:1 ပါရှိသည်။ ထို့အပြင် Vsmart Live ၏ ဖုန်းမျက်နှာပြင်သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အရှိဆုံးသော ပုံရိပ်များအား ဘက်ထရီများစွာ ကုန်ဆုံးခြင်းမရှိပဲ ပြသပေးသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည့်အပြင် မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာစနစ် (on-screen fingerprint sensor) ပါရှိသည့်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်အဝ ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကြာရှည်ခံမှုအရှိဆုံးသော ဘက်ထရီ သိုလှောင်နိုင်စွမ်း
အကောင်းမွန်ဆုံးသော စွမ်းဆောင်ရည်များအား ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် Vsmart Live တွင် အဆင့်အမြင့်မားဆုံးသော နည်းပညာ ၂ ခု အား ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ အဆိုပါ နည်းပညာ ၂ ခုမှာ အရည်အသွေး အမြင့်မားဆုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် Qualcomm Snapdragon 675 octa-core processor (of up to 2.0 GHz) နှင့် အက်ပလီကေးရှင်းများစွာအား တစ်ပြိုင်နက်တည်း အထစ်အငေါ့မရှိ အသုံးပြုနိုင်မည့် 6GB ပမာဏ RAM တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ဈေးနှုန်းအမြင့်မားဆုံးသော စမတ်ဖုန်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန် ထိုသို့ အကောင်းမွန်ဆုံးသော အဆင့်အမြင့်ဆုံးနည်းပညာများအား အသုံးပြုထားသည့် နည်းတူ အသုံးပြုသူများအနေနှင့် ဖုန်း ဘက်ထရီ သိုလှောင်နိုင်စွမ်း အပေါ် စိုးရိမ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပဲ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်လည်း Kyro နည်းပညာအား ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ 4,000 mAh ပမာဏရှိသည့် ဘက်ထရီသိုလှောင်နိုင်စွမ်းသည် ၁၉ နာရီကြာ အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်း (သို့) အွန်လိုင်းမှ ဗီဒီယိုနှင့်တေးသီချင်းများအား အား ၁၅ နာရီကြာ ကြည့်ရှုနားဆင်ခြင်း (သို့) ၆ နာရီကြာ ဂိမ်းကစားခြင်း (သို့) ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းထားသော တေးသီချင်းများအား ၆၃ နာရီကြာ နားဆင်နိုင်ခြင်း စသည်တို့အား ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Qualcomm Quick Charge 3.0 စနစ်ပါရှိသည့်အတွက် ဘက်ထရီသက်တမ်း ၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိအား မိနစ် ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့်ဖြင့် ပြန်လည်အားဖြည့်သွင်းနိင်မည် ဖြစ်သည်။
Vsmart Live အား Midnight Black၊ Ocean Blue နှင့် White Pearl အရောင် ၃ မျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး 4GB RAM, 64 GB ROM version အား မြန်မာငွေကျပ် ၄၃၉,၉၀၀ နှင့် 6GB RAM, 64 GB ROM version အား မြန်မာငွေကျပ် ၄၉၉,၉၀၀ ဖြင့် အသီးသီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Press release by VinSmart.
DxOMARK ဟာ Smartphones တွေရဲ့ Audio Quality ကို စတင် Review လုပ်နေပြီး Huawei Mate 20X ဟာ ထိပ်ဆုံးမှာနေရာယူ
OnePlus 7T လား OnePlus 7T Pro လား??